Diyaarad dagaal oo ka soo dhacday ciidamada Nigeria ee la dagaallamaya Boko Xaraam | Saxil News Network
Diyaarad dagaal oo ka soo dhacday ciidamada Nigeria ee la dagaallamaya Boko Xaraam
Image captionDiyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah
Ciidanka cirka ee Nigeria ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradahooda qumaatiga u kaca ee la dagaallamaya xooggaga Boko Xaraam ay ku soo dhacday waqooyi bari dalkaasi.
Diyaaradda ayaa soo dhacday gelinkii dambe ee shalay xilli uu dagaal culus deegaankaasi ku dhexmarayay milateriga Nigeria iyo dagaallamayaasha Boko Xaraam.
War qoraal ah oo uu soo saaray ciidanka cirka ee Nigeria ayaa lagu sheegay in diyaaraddaasi ay hawada ka taageeraysay ciidamada dhulka ee Boko Xaraam kula dagaallamaya deegaanka Damasak oo u dhaw xuduuda uu dalkaasi la leeyahay Niger.
Sababta keentay in diyaaradda ay soo dhacdo iyo faahfaahinta dadka saarnaa ayaan horay laga shaacin.
Milateriga Nigeria ayaa dhawaan xoojiyay duulaanka cirka iyo dhulka ah ee uu gobolkaasi ka wado, ka dib markii ay isa soo tareen weerarrada ay geysanayaan Boko Xaraam iyo dagaallamayaasha daacadda u ah ururka isku magacaabay dowladda Islaamka.
Nigeria: ‘ Waxaan dilnay hogaamiyayaal Boko Xaraam’
Tobanaan ka mid ah ciidamada Nigeria ayaa lagu dilay oo hub looga furtay weerarradaasi bilihii dambe ka dhacayay waqooyi bari dalkaasi.
Tallaadadii la soo dhaafay ayaa ciidanka cirka ee Nigeria waxa uu sheegay inuu tiro ka tirsan dagaallamayaasha taabacsan ururka isku magacaabay dowladda Islaamka uu ku dilay deegaankaasi, ka dib markii uu duqeeyay goob ay ku shirayeen oo u dhaw magaalada Baga.
Colaadda ka soo cusboonaatay gobolkaasi ayaa kusoo beegmaysa xilli bisha soo socota ay Nigeria ka dhici doonaan doorashooyinka madaxtinnimada iyo baarlamaanka, arinta ammaankuna ay tahay mid si weyn ay ugu ololeynayaan musharraxiinta kala duwan